बिरामीलाई खेर जाने फलफूलको सट्टा आर्थिक सहयोग गर्ने यो नौलो तरिका... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
हामी मध्ये धेरै जसो एक न एक पटक अस्पताल भर्ना त भएकै हौंला वा आफन्तलाई भर्ना गरेर राखेका हौं। नभए आफन्त बिरामी भएको बेलामा बिरामीलाई भेट्न र स्वास्थ्य अवस्था को जानकारी लिन त पुगेका हुन्छौं अस्पताल । यसरी बिरामीलाई भेट्न जाने क्रममा मनमा स्वास्थ्य लाभको कामना सहित खानेकुरा (बिस्कुट, हर्लिक्स, फलफूल इत्यादि), फुलको बुके, पेय पदार्थ जस्ता कुरा पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बिरामीलाई लिइदिन्छौं । नानीदेखि लागेको बानी भनेझैं हम्रो यो संस्कार हो । कतिले त मनैदेखि बिरामीलाई फलफूल, जुस, बिस्कुट, फुलको बुके आदि लग्छन् कतिपयले चाहिँ भेट्न आउँदा पनि खाली हात आयो भन्लान् भनेर करले केही लग्ने गर्छन् ।
अब कुरा रह्यो त्यो बिरामीको आफन्तले ल्याएका ति चिजहरुको कसरी उपायोग हुन्छ ? फुलको बुके भए २-३ दिनमै ओइलाएर जान्छ । फलफूल भए बिरामी भन्दा बढी त घर परिवार, कुरुवा, नातेदारले नै खाइरहेका हुन्छन ! अझै कति त अस्पतालमै कुहिएर जान्छन्। हर्लिक्स जुस आदि पेय पदार्थ त बट्टाका बट्टा सिदै होम डेलिभरी भइरहेको हुन्छ । अनि बिरामीलाई चाहिँ घरबाट वा अस्पताल क्यान्टिनबाट ल्याइएको सादा खाना वा जाउलो खान दिइन्छ । यो सब हाम्रो घर परिवार, छरछिमेक, इष्ट मित्र जो कोही पनि बिरामी हुँदा अस्पताल मा देखिने यथार्थ चित्र हो !
मैले यहाँ फलफुल, जुस, हर्लिक्स आदिले बिरामीलाई स्वस्थ रहन मदत गर्दैन पनि भन्न खोजेको होइन, यति भन्न खोजेको हो कि एक त यी चिजहरु बिरामिको उपभोगमा कमै आउँछन् । र, आएपनी कतिपय औषधि हालेर पकाइएका फलफूल तथा बजारी खानेकुराले बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छन्।
अब कुरा गरौ बिरामी तथा बिरामी पक्षको । यो समूहलाई चाहिँ अस्पताल बसाइँमा मुख्य दुइ कुराले पिरोलिरहेको हुन्छ । एउटा हो, बिरामीको रोगको जटिलता वा भनौं कहिले निको हुन्छ भन्ने छट्पटी, अर्को चाहिँ बिरामीको उपचारमा लाग्ने खर्च ! अनि आउट अफ पकेट अस्पताल शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेे हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य प्रणाली भएको समाजमा यो सोच आउनु स्वभाविकै हो । बिरामीलाई अस्पतालमा ल्याइपुर्याउँदा स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्ता हुनु र विस्तारै उपचार क्रमसङ्गै डिस्चार्जको समयमा उपचारमा लागेको खर्च जुटाउन चिन्ता हुनु बिरामी पक्षका दुई पाटा नै हुन्।
अस्पताल बसाइँको क्रममा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीको उपचारार्थ रात दिन त खटिरहेकै हुन्छन् । बिरामी भेट्न आउने आगन्तुकहरु पनि बिरामीलाई भेट्न जाँदा, बिरामीको अवस्था बारे बुझ्न जाँदा र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा बिरामी पक्षलाई सान्त्वना त मिल्ला पनि । तर, त्यही आगन्तुकका तर्फबाट बिरामीलाई केही सहयोग गरिदिए बिरामी पक्षलाई ठूलो राहत र हौसला मिल्न सक्छ । म कुरा गर्न खोजिरहेको छु, आर्थिक सहयोगको !
सामन्यतया नेपाली सामाजमा बिरामी भेटन् जाँदा आर्थिक सहयोग गर्ने चलन पाइएको छैन । सहयोग नै गर्न खोजे पनि दुबै पक्षलाई हिचकिचाउने गरेको देखिन्छ । तर, यस्तै कुरा लाई हाम्रै समाज को अर्को पाटा सँग जोडौ न, बिहेको बेलामा ! यो बेलामा दुलहीलाई कसैकोमा सबको अगाडि खाममा हालेर त कसैकोमा त बकाइदा रजिष्टरमा नाम र दिइएको रकम लेखाइन्छ र तुलना गर्ने नै हो भने बिरामीलाई भन्दा नव विवाहितलाई त्यो रकम को महत्व पनि नहुने हुन्छ । यही समाजले यसरी नै बिरामीलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदा खानेकुरा नलगेर आर्थिक सहयोग गरिदिए बिरामी पक्षलाई पनि केही हदसम्म अस्पताल बसाइको आर्थिक भार सहज हुन्थ्यो ।
यही विचारलाई आत्मसात गर्दै बिरामीकै आगन्तुकबाट बिरामीलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सङ्गै बिना हिचकिचाहट आर्थिक सहयोगको संस्कारलाई हाम्रो समाजमा अघि बढाउन अन्नपुर्ण न्युरो अस्पतालले बिगत केही महिनादेखि एउटा नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । यो कार्यक्रम सुरु भएको केही समयमै निकै सफल भएको र बिरामी तथा बिरामी पक्ष पनि आर्थिक सहयोगले गर्दा निकै नै लाभान्वित भएका छन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत बिरामीलाई प्रतक्ष्य रुपमा खाममा वा हातमा नगद नदिएर शिघ्र स्वास्थ्य लाभ कार्ड मार्फत् आर्थिक सहयोग गर्न सकिनेछ । कार्डको मूल्य रु२५०, रु५०० र रु १००० तोकिएको छ । अस्पतालले फेमेली हेल्थ नेपाल नामक संस्थासँग सहकार्य गरी यो कार्ड अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध गराउने भएकोले कार्ड खरिद गर्दा कार्डको कुनै छुट्टै रकम अनि कर पनि तिर्नुपर्ने छैन । बिरामीका आफन्तले अस्पताल फार्मेसी मार्फत् यो कार्ड खरिद गर्न सक्नेछन् र कार्डको पछाडि रहेको खाली भागमा शिघ्र स्वास्थ्य लाभको सन्देश कोरेर बिरामी तथा बिरामी पक्षलाई हौसला समेत दिन सक्नेछन्।
बिरामीले जम्मा पारेको कार्ड डिस्चार्ज हुने क्रममा अस्पतालको काउन्टरमा बुझाउँदा कार्डको मूल्य बराबरको रकम अन्तिम बिलबाट छुट पाउने छन् । विगत केही महिनादेखि अस्पतालमा आएका धेरै बिरामीका आफन्तहरुले यस कार्डको महत्व बुझी बिरामी तथा बिरामी पक्ष प्रति सहयोगको हात बढाइ सकेका छन् । साथै यो कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि अस्पतालमा आएका सय भन्दा बढी बिरामी तथा आगन्तुकसँग यस कार्यक्रमको बारे सल्लाह सुझाव लिँदा शतप्रतिशत घत लाग्दो समर्थन पनि मिलेको थियो । यो कार्यक्रम सुरुवात भएको केही महिनामैं अस्पताल फार्मेसीबाट बिरामी भेट्न आएका आगन्तुक हरुले एक हजारवटा भन्दा बढी कार्ड लिइ बिरामीलाई स्वास्थ लाभको शुभकामना साथै आर्थिक सहयोग गरिसकेका छन्।
सप्तरीबाट मष्तिस्कघात भएर यो अस्पतालमा उपचार गराउन आएका भगत यादवको अवस्था जटिल थियो । केही दिनको आइ।सि।युको बसाइ पश्चात बिस्तारै बिरामीको अवस्था राम्रो हुँदै गएको थियो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यादव परिवार अस्पताल आएको तेस्रो दिनदेखि नै अस्पताल प्रशासन समक्ष छुटको व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरिरहेका थिए । अस्पतालमा ९ दिन बसाइ भएको यादवको जम्मा बिल रकम ४५ हजार जति उठेको थियो । बिभिन्न ठाउँबाट आएका आफन्तले दिएका शुभकामना सहितको शिघ्र स्वास्थ्य लाभ कार्डबाट यादवको परिवारले कारीब ७५ प्रतिशत जति छुट पाउँदा उनको परिवारमा खुशीयाली छाएको थियो।
ट्युमरको शल्यक्रिया गरेकी रत्ना राईको परिवारलाई पनि यस कार्यक्रमले हर्षित नै बनाएको थियो । आफ्नो जो आफन्त आए पनी यस कार्यक्रमको बारे विस्तृत रुपमा ब्यख्या गर्दै फुर्सद थिएन राई परिवारलाई, मानौं यो कार्यक्रमले रत्नाको अनुहारमा स्वास्थ्य लाभकै चमक ल्याएको थियो । अस्पतालको बिभिन्न वार्डहरुमा त भनौं प्रतियोगिता सरह चलेको छ कि कुन वार्डमा दिनमा कतिवटा शिघ्र स्वास्थ्य लाभ कार्ड आयो भनेर ।
आखिर सबै थोक संस्कार नै रहेछ । पहिला पहिला बिहेमा खड्कुलो, गाग्री, भाँडाकुडा आदि इत्यादि दिने चलन थियो । त्यो संस्कार आधुनिकतासँगै जिन्सीबाट नगदमा परिणत भइसकेको सबैलाई अवगत नै छ । अस्पतालमा पनि यही संस्कारलाई अपनाउने हो भने बिरामी, बिरामी पक्ष, आगन्तुक, अस्पताल प्रशासन सबैमा प्रसन्नता र एक प्रकारको आर्थिक बोझको चपेटा घटाउन, बिरामी पक्ष र आगन्तुकबीच आपसी सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुन ठूलो मद्दत गर्नेछ । आशा छ, आगामी दिनहरुमा नेपालमा रहेका अन्य अस्पतालहरुले पनि यहि चलनको अनुसरण गर्दै आ–आफ्नो बिरामीलाई सहयोग हुने वातावरण मिलाउन सकिनेछ।
(डा गजुरेल अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर हुन् ) – स्वास्थ्यखबरबाट